Raisul wasaare ku-xigeenka Somalia iyo wafdi isugu jira wasiiro & saraakiil gaaray Kismaayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wafdi uu horkacayo raisul wasaare ku-xigeenka xukuumada Somalia Maxamed Cumar Carte ayaa gaaray magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose.
Maxamed Cumar Carte iyo wafdigiisa oo ka ambabaxay magaalada Muqdisho ayaa waxaa garoonka dayuuradaha magaalada Kismaayo ku soo dhoweeyey Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Juballand Max’uud Sayid Aadan iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan maamulkaasi.
Wafdiga ra’isul wasaare ku-xigeenka ayaa waxaa ka mid ah Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya, Wasiirka Gaadiidka, Taliyeyaasha Booliska iyo Nabad Sugidda Soomaaliya iyo madax kale.
Raisul wasaare ku-xigeenka ayaa saxaafada u sheegay in ujeedada booqashada ay isaga iyo wafdigiisa ee Kismaayo ay la xiriirto sidii ay kulamo ula qaadan lahaayeen madaxda maamulka iyo qeybaha bulshada magaalada kuwaasoo ku saabsan dhinacyada xoojinta nabada iyo doorashooyinka.
Maxamed Cumar Carte iyo wafdigan ayaa loo gelbiyey xarunta Madaxtooyada maamulka Jubaland halkaasoo ay kulan saxaafada banaanka looga saaray kula yeesheen madaxweynaha maamulkaas Axmed Madoobe.